त्रिशूलीमा बस दुर्घटना: मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो,३० घाईते कसको कहाँ उपचार हुँदै ?(अपडेट) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
त्रिशूलीमा बस दुर्घटना: मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो,३० घाईते कसको कहाँ उपचार हुँदै ?(अपडेट)
काठमाडौं । धादिङको गजुरीबाट त्रिशुली नदीमा बस खस्दा मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ । आइतबार बिहान भएको दुर्घटनामा ५ जनाको घटनास्थलमा र अन्य चारजनाको उपचारको क्रममा निधन भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी धादिङले जनाएको छ । झापाको कांकडभिट्टाबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ना ७ ख ४३८७ नं.को यात्रुबहाक बस धादिङको गजुरीबाट त्रिशुली नदीमा खसेको हो । दुर्घटनामा परि ३० जना यात्रुहरु घाईते भएका छन् । कतिपय यात्रु सामान्य उपचारपश्चात फर्किएको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘पुनर्लेखन र विगतका सहमति कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता नभएसम्म वार्ता हुँदैन’
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले संविधान पुनर्लेखन र विगतमा गरिएका […]
एमाओवादी र मधेसीमोर्चा बीच यसरी दूरी बढ्यो
जेठ २२ । काठमाडौँ, ३० दलीय विपक्षी गठबन्धनका संयोजक पुष्पकमल दाहालले बैठक थाल्दै भने, ‘मैले तपाईंहरुका […]
निजी विद्यालयलाई शुल्क बढाउन स्वीकृति : विद्यालय मोटाउने, अभिभावक आर्थिक मारमा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेकानिजी विद्यालयलाई मासिक शिक्षण शुल्क २७ […]
चिकित्सा शिक्षा विधेयक: पेलेरै पारित गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशकै स्वरुपमा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आमरण अनशनरत डा। गोविन्द केसीसँग […]
हार निश्चित हुँदा हुँदै प्रदेश ५ को उपसभामुखमा कांग्रेसको उम्मेदवारी
बुटवल । प्रदेश नं ५ को उपसभामुख पदका लागि आज नेपाली काँग्रेसकी रिना खनाल विकले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी […]